न बेड पाइन्छ, न एम्बुलेन्स : आफन्त पुकारिरहेछन् भगवान - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका १३ बैशाख २०७८, 8:09 am
भक्तपुरका ३३ वर्षीय युवकको मृत्यु भएपछि टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आइतबार बिहान एकाएक सन्नाटा छायो । कोरोनाले युवाकै ज्या’न लिएकामा अस्पतालका चिकित्सक र व्यवस्थापकसमेत दुःखी भए ।
‘यति कम उमेरका युवकले समेत कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनुपरेपछि हामी साह्रै चिन्तित छौं,’ अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले भने । यही अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत सुन्दरीजलका ४३ वर्षीय पुरुषको पनि आइतबार नै मृ’त्यु भयो ।
अपराह्न साढे ३ बजेतिर उनको मृ’त्युको खबर थाहा पाएपछि अस्पताल परिसरमा आफन्तको रुवाबासी चलेको थियो । त्यही बेला भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बूढानीलकण्ठका ५४ वर्षीय पुरुषका आफन्त भने भगवान् पुकारिरहेका थिए ।
अक्सिजनको हाहाकार हुने चिकित्सकको चेतावनी
अस्पतालहरुमा गम्भीर खालका कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) का बिरामी बढ्न थालेपछि भयावह अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्रगतिमा बढिरहँदा काठमाडौं उपत्यकामा अक्सिजनको अभाव हुने चिकित्सकहरुले चेतावनी दिएका छन् । यही गतिमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गए छिट्टै अक्सिजनको हाहाकार उनीहरुको भनाइ छ ।
कोभिड—१९ संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना भएकामध्ये ९५ प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ । उपत्यकाका अस्पतालमा कोभिडका बिरामीलाई छुट्याइएका जनरल बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरमा बिरामीले भरिएका छन् ।
आईसीयू र भेन्टिलेटर आवश्कता नपर्ने जनरल वार्डमा भर्ना भएका बिरामी प्रायः सबैलाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)का कोभिड संयोजक डा.सन्तकुमार दासले रातोपाटीलाई बताए ।
‘टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएका कोभिडका ९० प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजन दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जेनतेन गरेर धानिएको छ, थप बिरामी बढेपछि अक्सिजनको अभाव हुन्छ ।’
टिचिङ अस्पतालमा एक हजार लिटर अट्ने अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएर थन्किएको छ । अब सम्बन्धित निकायले अक्सिजनको व्यवस्थापन नगरे बिरामीको उपचारमा चुनौती थपिने उनले बताए ।
अस्पतालमा ११ जना आईसीयूमा, ११ जना नै भेन्टिलेटर र अन्य ५० जना उपचाररत छन् । कोभिडका ५४ जना बिरामीले अक्सिजन लगाएको उनले बताए ।
‘अब यही गतिमा कोभिड बिरामी अस्पताल उपचारका लागि आए भने थेग्न गाह्रो हुन्छ,’ डा. दासले सुनाए, ‘अहिले संक्रमितलाई आईसीयू, भेन्टिलेटर अभाव भएझैँ अक्सिजनको पनि अभाव सृजना नहोला भन्न सकिदैँन ।’
स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन सूचना जारी गर्दै संक्रमण दर यही गति बढ्दै गए अस्पतालमा राखेर उपचार नसकिने अवस्था सृजना भएको आइतबार चेतावनी दिएको छ । सरकारले पहिलो महामारीबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद्हरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यता पाटन अस्पतालमा डेढ वर्षदेखि अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको निर्देशक डा.रवि शाक्यले बताए । ‘अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई सहज तरिकाले अक्सिजन उपलब्ध गराएका छौं,’ उनले भने, ‘ यसरी अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामी बढ्दै गए भने अक्सिजनको अभाव हुन्छ ।’
अस्पतालले डेढ वर्षदेखि बिग्रिएको अक्सिजन प्लान्टलाई बनाउने कोशिस गरिहेको उनको भनाइ छ । दैनिक रुपमा पाटन अस्पतालमा तीन सय सिलिन्डर अक्सिजन आपूर्ति हुने उनले सुनाए ।
यस्तै वीर अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट करिब एक वर्षदेखि बिग्रिएको छ । वैशाखमा बिग्रिएको अक्सिजन सप्लायर्स मेसिनको मर्मत कार्य भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । वीर अस्पतालका फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्कीले ४० जना कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन दिइरहेको बताए । ‘अहिले पनि सप्लायर्सबाट सहज रुपमा अक्सिजन सिलिण्डर पाएका छौँ’, उनले भने ।
नेपालमा संक्रमण दर बढेपनि हाल बिरामीका लागि अक्सिजन सहज रुपमा उपलब्ध भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत शाखाका प्रमुख उपेन्द्र ढुंगानाले दावी गरे ।
हालसम्म भारतबाट अक्सिजन आयात हुने गरेको उनले सुनाए । ‘भारतमा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदा अक्सिजनको अभाव भएको भारतीय संचारमाध्यमले बताउँदै आइरहेका छन्,’ उनले भने, भने ‘त्यहाँ नै अभावको भए भारतले नियमितरुपमा अक्सिजन नपठाए यहाँ अक्सिजन अभाव हुन सक्छ ।’ हाल दैनिक ७ हजार सिलिन्डर अक्सिजन सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा खपत हुँदै आएको छ । संक्रमण दर उच्च रहेको बेला यो माग २० हजार सिलिन्डरसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।